Ugu Weyn Ee Ruta
Waa maxay xididka waxtarka leh: isticmaalka alaabada daawooyinka ee daawada dhaqameed
Herb Ruta kariimadu waxay leedahay isticmaalka ballaaran - sida dawo, iyo sida sunta, iyo sida cunnooyinka cunnada. Maqaalkan waxaad ku baran kartaa wax walba oo ku saabsan xididka iyo tilmaamihiisa isticmaalka. Waxa kale oo aanu kuu sheegi doonaa waxyaabaha ku saabsan soo ururinta dhirta dhakhtarkan iyo ujeedooyinkooda. Ruta: sharraxaadda warshad daawo ah Geedi ah rue iyo hoygeeda daaweyntu waxay yaqaanaan qof walba, sida sawirka geedka thisennial this yaqaan.
Qaadashada rue: beerashada iyo daryeelka beerta
Way adag tahay in la qiyaaso in qofku aanu aqoonin warshad noocan oo kale ah sida xididka. Taariikhdeedu waxay dib u socotaa dhowr kun oo sano, waxaana dhammaanteed loo isticmaali jiray daawada dhaqanka iyo nolol maalmeedka. Hadda ubax ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa karinta, daawooyinka, iyo sidoo kale antidotiyal qaar ayaa diyaar ah. Waxay ku taallaa meel sharaf leh ee daawada dadweynaha casriga ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ruta 2020